अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Nepali Update
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आईसीसी के योजनाकारहरुबिरुद्ध हवाई हमला गरेको अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डका प्रवक्ताले बताएका छन् । आतंकवादबिरुद्धको अपरेशन अन्तरगत नाङ्गाहार प्रान्तमा हवाई आक्रमण गरिएको हो । निशानामा पारिएकाहरुलाई हवाई आक्रमणबाट मारिएको र आक्रमणमा सर्वसाधारणको क्षति नभएको प्रवक्ता क्याप्टेन बिल अर्बानले बताएका छन् । राष्ट्रपति जो बाइडेनको स्वीकृतिपछि अमेरिकी सेनाले हवाई हमला गरेको हो । अफागानिस्तानको विमानस्थलबाहिर […]
एजेन्सी। राजधानी काबुलसहित अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिन सफल भएसँगै तालिबानले आयोजना गरेको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले ‘२० वर्षको सङ्घर्षपछि देशलाई मुक्त गरेको र विदेशीहरूलाई निकालेको’ बताएका छन्। यो पूरै देशका लागि गर्वको क्षण रहेको उनले वताए । अफगानिस्तान अब द्वन्द्वको रणभूमि नहुने हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। हामीविरुद्ध लडेका सबैलाई हामीले माफी दिएका छौँ। हामी […]
३०४ जनाको मृत्यु, १८ सयभन्दा बढी घाइते हाइटी भूकम्प अपडेट
काठमाडौँ- हाइटीमा गएको ७.२ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पमा कम्तीमा ३०४ जनाको मृत्यु भएको छ । भूकम्पपछि भत्किएका कयौँ संरचनामा परेका १८ सय जनाभन्दा बढी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ । घना बस्ती भएको राजधानी, मध्य पोर्ट–अउ–प्रिन्सबाट १६० किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु भएको गएको भूक्पको झट्का छिमेकी मुलुकहरूसमेत महसुस गरिएको छ । हाइटीका प्रधानमन्त्रीले भूकम्पका कारण गम्भीर […]
२० साउन, काठमाडौं । अफगानिस्तानका रक्षामन्त्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदीको घरमा आक्रमण भएको छ । सो घटनामा चार जना मारिएका छन् । हतियारधारी समूहले कार बम र गोलीमार्फत् आक्रमण गरेको समाचार एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् । आक्रमणको समयमा रक्षामन्त्री बिस्मिल्लाह भने थिएनन् । उनका परिवारका सदस्यहरुलाई पनि सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकालिएको थियो । यो घटनामा […]
को-रोना परीक्षण आफैँले गर्न मिल्ने किट तयार भयाे अब हरेक पसलमा उपलब्ध हुने !
आफैँले को-रोना परीक्षण गर्न मिल्ने किट तयार भयाे अब हरेक पसलमा उपलब्ध हुने ! दक्षिण कोरियाले को- रोना सङ्क्रमण भए नभएको थाहा पाउन आफैँले परीक्षण गर्न मिल्ने किट निर्माण गरेको छ । किट यहाँका २ औषधि निर्माता कम्पनी हुमासिस र एसडी बायोसेन्सरले निर्माण गरेका हुन् । यो किटमार्फत आफूलाई को- रोना लागेको शङ्का लागेमा घरमै […]
काठमाडौं । अमेरिकी कम्पनी एप्पल भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको २० वर्ष पुगिसकेको छ । अब बल्ल एप्पलले भारतीय बजारमा आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना उत्पादनहरु बेच्ने भएको छ । बुधबार एप्पलले भारतमा आफ्नो पहिलो अनलाइन स्टोर खोलेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा पहिलो अनलाइन स्टोर खोल्ने कदमलाई एप्पलको भविष्यका लागि […]
अष्ट्रेलियाले छिटै तयार हुने आशा गरिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आफ्ना नागरिकका लागि नि:शुल्क दिने जनाएको छ । त्यो खोप औषधि कम्पनी आस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरिरहेका छन् र अहिले परीक्षणको क्रममा छ । प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले परीक्षण सफल भएमा आस्ट्राजेनेकासँगको सम्झौताले हरेक अस्ट्रेलियालीका निम्ति खोप सुरक्षित हुने बताए । उनका अनुसार अढाई करोड […]
डब्लूएचओको बधाई कोरोना भ्याक्सिन बनाउने वैज्ञानिकलाई
काठमाडौं – अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले विकास गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको भ्याक्सिनबाट सकारात्मक परिणाम देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बधाई दिएको छ । वैज्ञानिकहरुले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्ने गरी भ्याक्सिन परीक्षण गरेका थिए । यो भ्याक्सिनले कोरोना भाइरसविरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता काम गर्न सहयोग गरेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । वैज्ञानिकहरुले यसलाई सकारात्मक परीक्षण भएको र […]
मास्क र औषधीसहित मेडिकल टिम पठाऊन तयार छौं : चीन
भरखरै कोरोना भाइरसवाट जुधेको चीनले अब छिमेकी मुलुकहरुलाई कोरोना विरुद्धको लडाइमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। चीनमा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको छ । चीनको वुहान क्षेत्रवाट सुरु भएको कोरोना अहिले विश्वका अन्य मुलुकमा फैलिदै गएको छ । करिब डेढ महिनामै कोरोना नियन्त्रण गरेको चीनले आफुहरुको ज्ञान र प्रविधिलाई अन्य मुलुकमा बाँड्न चाहेको बताएको छ । सोही […]
काठमाडौँ — कुवेतमा बालुवाको ढिस्कोले पुरिएर चार जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । अरब टाइम्सले जनाएअनुसार कुवेतको अल मुत्ला क्षेत्रमा निर्माणस्थलमा बालुवाको ढिस्को खस्दा ४ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेहरुको पहिचान खुल्न बाँकी छ । बालुवाकाे ढिस्काेमा पुरिएकाकाे उद्धारमा खटिएका कुवेती अधिकारी तस्बिर : अरब टाइम्स चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा […]